Baarlamanka Soomaaliya oo maalinta berri la hor-keenayo mooshinka ka dhanka ah Ra’iisul Wasaaraha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
10th November 2014 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Gudoonka Baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in maalinta berri oo Talaado ah, taariikhduna ku beegan tahay 11-bisha November uu jiro shirkii Baarlamaanka ee caadiga ahaa, kadib markii maalmihii u dambeeyay uu hakad ugu jiray arrimaha xalinta khilaafaadka Madaxda dowladda iyo dadaaladii uu waday Gudoonka.
Ilo wareedyo muhiim ah oo ku dhow dhow Xafiiska Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa u xaqiijiyay Mareeg.com in Xildhibaanada Baarlamaanka lagu wargeliyay in maalinta ajandayaasha shirka uu ku jiro mooshinka ay Khamiistii gudbiyeen Xildhibaanada ee ka dhanka ahaa Ra’iisul Wasaaraha.
Shir-gudoonka ayaa berri ka hor-sheegaya kulanka in Baarlamaanka uu hor-yaalo mooshinka, iyadoo kadib Xildhibaanada loo qeybin doono nuqullada mooshinka, isla markaana muddo shan cisho kadib uu bilaabanayo ka doodista mooshinka sida uu qabo xeer hoosaadka Baarlamaanka.
Sidoo kale muddo shan cisho kadib ayaa la aqrin doonaa magacyada Xildhibaanadii saxiixay mooshinka, inta ka horeysa waqtigaasna Baarlamaanka wax dood ah kama yeelanayo Mooshinka, iyadoo berri qodobo kale oo muhiim ah uu ka doodayo Baarlamaanka.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa goor sii horeysay fariin qoraaleed (SMS) loogu sheegay in kulanka Baarlamaanka uu berri jiro marka ay saacadu tahay 9-ka subaxnimo, ajandahana uu qeyb ka yahay mooshinka laga keenay Xukuumada uu hogaamiyo Ra’iisul Wasaare C/wali Sheekh Axmed.
Labadii maalmood ee u dambeeyay ayaa waxaa socday dadaalo xoogan oo caalami ah, kaasoo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, waxaana xubno ka socday Beesha Caalamka ay isku dayayeen in labada dhinac ay xal gaaraan, hase ahaatee ay mira dhali waayeen dadaaladaas.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku adkeystay in isaga iyo Ra’iisul Wasaaraha aanay wada shaqeyn karin, isla markaana ay tahay inuu meesha ka baxo, isaguna uu muddo labo todobaad gudahood ku soo magacaabayo Ra’iisul Wasaare soo dhisa Xukuumad.
Si kastaba ha ahaatee Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa geli doona loolan ku aadan mooshinkan, waxaana labada dhinac ee kala taageersan Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ay wadaan dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed oo midba midka kale uu ku doonayo inuu kaga guuleysto Baarlamaanka marka ay timaado codeynta mooshinkan.